Aqriso: Waraysi Xiiso badan oo uu bixiyey Xiddiga Mohamed Salah kaas oo uu kaga hadlay Waxyaabo Xiiso badan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Aqriso: Waraysi Xiiso badan oo uu bixiyey Xiddiga Mohamed Salah kaas oo uu kaga hadlay Waxyaabo Xiiso badan
(09-06-2018) Wargayska Marca ee dalka Spain ka soo baxa ayaa fursad u helay in uu waraysi khaas ah ka qaado Mohamed Salah markii ugu horaysay tan iyo wixii ka danbeeyay finalkii UEFA Champions league ee uu Salah dhaawaca uga baxay. Mohamed Salah oo haddaba dalka Spain daawayn ku qaadanaya ayaa sheegay in waqtigii noloshiisa ugu xumaa ahaa dhaawicii finalkii UCl ee Kiev ku soo gaadhay.
Waraysigan oo dhamaystiran waxaa maanta oo sabti ah lagu daabici doonaa wargayska Marca labadiisa qaybood ee kan waraaqda daabacan ah iyo waliba qaybta websiteka ah, laakiin waxaa la sii daayay qayb hordhac ah oo uu Salah dhar arimood kaga hadlayo.
Waxyaabaha Mohamed Salah waraysigan dheer lagu waydiiyay waxaa ka mid ah, finalkii Champions league, dhaawicii soo gaadhay, Sergio Ramos, koobka aduunka, xulka qarankiisa Masar, xulka qaranka Spain iyo waxyaabo badan oo la xidhiidha.
Mohamed Salah oo ka hadlaya in uu finalkii Champions league dhaawac kaga baxay ayaa yidhi: “Ka bixitaankii finalku waxa uu ahaa waqtigii ugu xumaa waayahayga ciyaareed. Waxaan ka fikiray in aan seegayo koobka aduunka , waxay ahayd burbur”.
Mohamed Salah oo hadalkiisa uu kaga hadlay xulka qarankiisa Masar wax yar laga sii daayay ayaa yidhi: “Anagu in aanu koobka aduunka u soo baxnay waxay ugu dhawaan noo tahay sida Spain oo koobka ku guulaysatay”.
Waraysigan oo ah mid aad u xiiso badan isla markaana Mohamed Salah su’aalo badan lagu waydiiyay waxaad insha allah isaga oo faah faahsan la socon doontaan marka maanta uu wargayska Marca si buuxda u daabaco markaas oo aanu insha Allah idiin soo wada turjumi doono.